‘पहाड अलग पारेर मधेशमा दुई प्रदेश हुनसक्दैन’ (कृष्णप्रसाद सिटौलासँग अन्तर्वार्ता)
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, मंसिर ६, २०७३
‘पहाड अलग पारेर मधेशमा दुई प्रदेश हुनसक्दैन’
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग हिमालका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको अंश ।
कांग्रेसको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश, संघीय संसद् तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन नभई राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन । संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ सम्म मात्र भएकाले हामीसँग एक वर्ष दुई महीना जति समय छ । त्यतिबेलासम्म तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ, नत्र मुलुक गम्भीर संवैधानिक–राजनीतिक संकटमा पर्छ । त्यसैले, कांग्रेसका निम्ति अहिले संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो ।
यस्तो बेलामा पनि कांग्रेसले संविधान संशोधन, महाअभियोग जस्ता विषयमा निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुको कारण के हो ?
संविधान संशोधनको विषयमा सरकार प्रमुखले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले पहलकदमी गर्ने मात्र हो । प्रधानमन्त्रीबाट अजेण्डा आएपछि त्यसमा छलफल गरौंला । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तामा कांग्रेस संलग्न भएन, एमाले–माओवादी मिलेर गरे, जुन संसदीय प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेको छ ।
कांग्रेसले नागरिकता, सीमांकन जस्ता संविधान संशोधनका विषयमा ठोस धारणा ल्याएको छैन नि !
नागरिकतामा हामी प्रष्ट छौं । अंगीकृतको विषयमा संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो ठीक छ । मधेशी मोर्चाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ, जुन गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको प्रमुख पद दिने भयो भन्ने हल्ला शतप्रतिशत निराधार हो । पार्टी सभापतिले यसको खण्डन गरिसक्नुभयो । जहाँसम्म सीमानाको विषय छ, त्यसमा मैले कहीं केही गर्न सकिंदैन भन्न त मिल्दैन, तर पहाडलाई अलग पार्ने र मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने कुरा सम्भव छैन । मोर्चाले पनि त्यस्तो भने जस्तो लाग्दैन । भने पनि सार्वजनिक खपतको लागि होला ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भनेझैं कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको हो ?
संविधान संशोधन गर्ने भनेकै औचित्यको आधारमा हो ।
तपाईंहरूले एमालेका नेताहरूसँग छलफल, संवाद केही गरेको देखिंदैन । एमाले बेगर पनि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने निर्क्योलमा कांग्रेस पुगेको हो ?
एमालेलाई छोडेर कांग्रेस अगाडि बढ्दैन । हामी संविधानका मौलिकता बचाएर सहमति गरौं भन्नेमा छौं । ८–१० वर्षपछिको कुरा अलग्गै हो, तर अहिले संविधानको मौलिकतालाई यताउति पार्नुहुँदैन । यसका लागि मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
हामीलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएसम्म सबै दलसँग छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्थक ढंगले छलफल अगाडि बढेको हामीलाई बताउनुभएको छ । त्यसले आकार लिएपछि उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुहोला । सरकार प्रमुखको हैसियतले स्वाभाविक रुपमा बढी भूमिका हुने प्रधानमन्त्रीले हामीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री सहमति अनुसारै चल्नुभएको छ ।
यतिबेला कम्तीमा साझा मुद्दामा कांग्रेस र एमाले एकठाउँ उभिन नसक्ने हो भने ७ माघ २०७४ को समयसीमा कसरी भेटिएला ?
संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस–एमाले मात्र नभई माओवादी, मधेशकेन्द्रितलगायत सबै दलको सहमति अत्यावश्यक छ । यसमा कम्तीमा पनि दुईतिहाइको राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । त्यसका लागि सबै सरकारमा बस्नैपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति तथा स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति हुनैपर्दछ ।
संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउने उपाय के हुन सक्ला ?
मधेशी मोर्चामा धेरै पार्टी छन्, थुप्रै नेता हुनुहुन्छ । संशोधनको विषयमा उहाँहरू स्पष्ट नभए जस्तो देखिन्छ । एक प्रदेश, दुई प्रदेश भन्ने त पुरानो कुरा भइसक्यो । पाँच नम्बर प्रदेशमा केही ‘करेक्सन’ गर्ने विषयमा छलफलै गर्न नसकिने होइन, तर नीतिगत रुपमै मधेशमा दुई प्रदेश र पहाड अलग भन्ने हुनसक्दैन । असम्भव कुरामा किन कथा हालेर बस्ने ?
७ माघ २०७४ भित्र निर्वाचन गरिसक्न के–के चुनौती छन् ?
निर्वाचित संस्थाबाट बनेको संविधानको कार्यान्वयन संसारमा जहाँ पनि कठिन नै हुन्छ । भारतमा ६७ प्रतिशतले बनाएको संविधान दक्षिणले मान्दैनौं भन्यो, तर त्यहाँका नेताहरू चुनौती चिर्न सफल भए ।
नयाँ संविधान आएपछि त्यसअन्तर्गतका पद लिन हाम्रा नेताहरू हतारिएर, तर संविधानको मूल मर्म अनुसार निर्वाचन गर्न इच्छाशक्ति देखाएनन् । अहिले दाहालजीको पालामा पनि ओलीजीको पालामा जस्तै देखिएको छ । सबै दलका शीर्ष नेताले सोच्नुपर्छ– हाम्रो कमजोरीका कारण संविधानमा बाधा खडा हुँदैछ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचनामा हदैसम्म लचिलो हुन कांग्रेस तयार छ । मिलेको छैन भने जनताको माग बमोजिम पछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभामा कसैको बहुमत छैन । संविधान पनि एउटा पार्टीले नभई सबै मिलेर ल्याएको हो । त्यसमा मिलेरै संशोधन गर्न सकिन्छ । भोलिको संसद्ले पनि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । अहिले कार्यान्वयन भएन भने संघीयता, गणतन्त्र र समग्र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठ्छ । पार्टीहरूको सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रले दुःख पाउने होइन । परिवर्तन जोगाउने हो भने संविधान जोगाऔं, होइन भने कुर्सी मात्रै ओगटेर बसौं ।
अझै समय छ । नेताहरूमा इच्छाशक्ति पलाओस् । इच्छाशक्ति नहुनेले पद ओगटेर बस्नुहुँदैन । बागडोर सम्हालेपछि काम गर्न सक्नुपर्दछ । अबको हप्ता–दश दिन भित्र निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा दलहरूको बीचमा अविश्वास आउँछ ।
लोकमानसिंह कार्कीको विषय कांग्रेस सांसद्हरूले संसद्मा प्रवेश गराएका थिए, तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, किन ?
हामीले अगाडि बढिसकेको महाअभियोग प्रक्रिया रोक्नु भनेका छैनौं । संसद्‌मा स्वतन्त्र ढंगले साथीहरूले बोलिरहनुभएकै छ । अब संसदीय समितिले छानबीन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन ल्याउने हो । त्यसपछि पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले सोच्ने हो । अर्कोतिर यो न्यायिक प्रक्रिया जस्तो पनि छ । अभियोग पुष्टि हुन्छ, हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैका लागि हामीले समय लिएका हौं ।
महाअभियोगलाई कांग्रेसले बार्गेनिङको विषय बनाएको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
महाअभियोग र संशोधन फरक विषय हुन् । महाअभियोग एउटा व्यक्ति र पदसँग जोडिएको विषय हो भने संविधान संशोधन जनताको बृहत्तर हितसँग जोडिएको विषय हो । हामीले महाअभियोगलाई बार्गेनिङको विषय बनाएका छैनौं र बनाउनुहुँदैन पनि ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट अडान लिने गरेको पछिल्लो उदाहरण संसद् पुनस्र्थापना हो । भारतको नाकाबन्दी, महाअभियोग जस्ता विषयमा भने प्रष्ट धारणा आएको देखिएन । कांग्रेसको निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको हो ?
प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अरु कुदिसके भनेर कांग्रेस पनि कुदिहाल्दैन नि ! महाअभियोगमा नेतृत्वदायी भूमिका नभए पनि समय आएपछि निर्णय लिन्छ, कांग्रेसले । सभापतिले लिने निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ ।
शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएपछि कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय लिन नसक्ने अवस्था आएको भन्न मिल्छ ?
गिरिजाबाबु जस्तो निर्णायक त सुशील’दा पनि हुनुभएन । सुशील’दा र शेरबहादुरजीको उस्तै–उस्तै देखिंदैछ । संगठन निर्माणमा सुशील’दाले ‘टाइमबाई’ नै गर्नुभयो । उहाँको पालामा विभागहरूले काम गर्न सकेनन् । शेरबहादुरजीको एकवर्ष पुगेको छैन, तर सुशील’दाकै पदचिह्नमा देखिनुहुन्छ ।
सभापतिको उम्मेदवार र पूर्वमहामन्त्रीको हिसाबले सुझाव दिने गर्नुभएको छैन ?
संगठन निर्माणलाई गति दिनुस्, विभागहरू गठन गर्नुस् भनेको छु । उहाँले गर्छु भन्न छोड्नुभएको छैन, गर्नुभएको पनि छैन । पार्टीको निश्चित लक्ष्य र गन्तव्य हुन्छ । त्यसअनुसार पार्टीलाई सुदृढ, सबल बनाउन उहाँले चाल्ने कदममा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।
तरुण दलको अधिवेशनमा सभापति देउवा र यहाँको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने ?
तरुण दलको अधिवेशनमा शेरबहादुरजीले जसरी पदाधिकारी तोक्ने अवस्था गराउनुभयो, त्यो उपयुक्त लागेन मलाई ।
नेताहरूले भ्रातृ संगठनका पदहरू गुट अनुसार भागबन्डा गरे । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन हुन दिनुपर्ने होइन र ?
पार्टीको विधान विपरीत विल्कुलै गलत भएको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक ढंगले पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता लत्याएर मनोनीत गर्नु त हुन्थेन नि ! यसले न पार्टीलाई बलियो बनाउँछ न त कार्यकर्तालाई एकताबद्ध पार्छ । नेपाली कांग्रेसमा यस्तो कुराको अन्त्य होस् ।
महाधिवेशनमा तपाईंसहित तीन जना सभापतिको उम्मेदवार थिए । महाधिवेशनपछि तपाईं पार्टी सभापतिप्रति बढी नै ‘लोयल’ हुनुभयो भन्ने आरोप छ । वास्तविकता के हो ?
निर्वाचित भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा तमाम कांग्रेसको सभापति हो । त्यो नाताले मैले सहयोग गरेको हुँ र सहयोग रहन्छ । यो सबै कार्यकर्ताको कर्तव्य पनि हो ।
महाधिवेशनका बेला यहाँले बनाउनुभएको गुटको औचित्य अब सकियो ?
गत महाधिवेशनमा मेरो खाली महामन्त्री र कोषाध्यक्षको टीम थियो, सदस्यहरू बनाउन सकेको थिइनँ । उद्घाटनको अघिल्लो दिन मात्र निर्णय गरेको हुँ । पार्टीको सैद्धान्तिक, नीतिगत, रणनीतिक र संगठनको नेतृत्वलगायतका विषयमा सबैसँग मेरो प्रतिस्पर्धा जारी रहन्छ ।
पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा वैचारिक धरातलमा उभिएर नयाँ दृष्टिकोण दिन खोेजेको छु । नेपालमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम सबैमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । कांग्रेसले हिजोकै मान्यताबाट नयाँ नेपाल बनाउन सक्दैन ।